Yan Aung: Fulbright Scholarship Application!!!
ကျွန်တော့်ရဲ့ ပထမဆုံး ဦးဦးဖျားဖျား သတင်းကောင်းကတော့ ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ American Center, USIS မှ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ပညာသင်နှစ်အတွက် Fulbright Scholarship Application များကို လက်ခံနေပါပြီဆိုတာပါပဲ.
သူက Master Program အတွက်ပါ။ TOEFL အနည်းဆုံး (550), IELTS (6.5) လိုပါတယ်။ TOEFL မဖြေရသေးသူများ မဖြေလည်းရပါတယ်။ USIS မှာ English Proficiency Exam ကို သွားဖြေရုံပါပဲ။ Thur (March 22) နဲ့ Sat (March 24) မှာ လုပ်ပါမယ်။ March 16 နောက်ဆုံးထားပြီး Sign Up လုပ်ရပါမယ်။
အသေးစိတ်ကို ကျွန်တော့်ရဲ့ PDF File မှာဖတ်ရှုကြည့်ပါခင်ဗျာ...
သြော်. ပြောဖို့မေ့နေတယ်။ Fulbright Scholarship က လုံးဝ Full ပေးတာပါ။ အားလုံးကို Cover ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော် လျှောက်ဖို့လုပ်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကို Ban ထားလုိ့မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မို့ အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခု အဖြစ် လက်တို့ ပြောကြားလိုက်ရကြောင်းပါ...
Fulbright Scholarship Application.pdf